Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: ဖေဖော်ဝါရီမှတ်တမ်း (from သီဟထွန်း Bsc(Luv) ၏ ဖော် ဝပ်မေးမှ)
ဖေဖော်ဝါရီမှတ်တမ်း (from သီဟထွန်း Bsc(Luv) ၏ ဖော် ဝပ်မေးမှ)
(မျောလွင့် နေတဲ့ တိမ်~~စိတ္တဇဆန်တဲ့ ဒီမိုးများ~~~ရွာနေတုန်း~~ငါချ မ်းလို့ တုန်
မိုးသည်းတဲ့ ညတွေမှာ~~~ ချဲတွက်နေ တညလုံး~~ ချဲမပေါက်တဲ့ ငါတော့ ရူး)
ဝေးခဲ့ ပြီ…… အတိုးပေးပြီးငါကပိုက်ဆံချေးမလို့ …..သံဓိဏ္ဌာန်ချထားခဲ့ တာဘဲ…….ငါ မင်းဆီကများရမလားလို့ 
ငါကြည့် တဲ့ အပြာကားတွေ…ဗိုက်ပူမ က ငှားသွား….ငါ့ ရဲ့ အပြာရုပ်ရှင်တွေ ကာတွန်းခွေ အဖြစ်နဲ့ပြန်ရ….ငါ့ အဖေ၀ယ်သိမ်းထားတဲ့ ဟာတွေ….အဖေသိရင်သေပါ ပြီ…အဖေသိရင်တော့ သေပါပြီဗျာ
ဒီဒိုင်ရာရီကိုရေးသား….မင်နဲ့ ငါနဲ့ ပျော်ရွှင်မြူး…ဆပ်စလူးထ ပေါင်းလဲမနဲပါဘူး သူများဆ်ီမှာ အကြွေးတင်နေတာ…ဘယ်လိုပြန်ဆပ်
ရမလဲ… မသိတော့ ဘူး
မင်းလိုချင်တဲ့ ၂ လုံးဂဏန်း..ငါ့ ဘက်ကမပေးနှိုင်….ယုံကြည်စွာမျှော်လင့် ခဲ့ငါတို့ နှစ်ယောက်တော့ မဝေးနိုင်…..ဘာကြောင့်ဒီနံပတ်ကမထွက်ရတာလဲ ငါ့ ဦးနှောက်ကမတွေးနိုင်…ဒီနေ့ အထိမမေ့ နိုင်..ငါ ချဲထိုးဆဲပဲယနေ့ တိုင် ငါ့ အခန်းနံရံတွေပေါ်မှာ..ချဲဂဏန်းတွေကပ်ထားဆဲ
ငါ့ နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုကတော့ဒီနေ့ ကစပီးရပ်တန့် ခဲ့ 
(မျောလွင့် နေတဲ့ တိမ်~~စိတ္တဇဆန်တဲ့ ဒီမိုးများ~~~ရွာနေတုန်း~~ငါချမ်းလို့ တုန် မိုးသည်းတဲ့ ညတွေမှာ~~~ ချဲတွက်နေ တညလုံး~~ ချဲမပေါက်တဲ့ ငါတော့ ရူး)
တိုက်ဆိုင်လိုက်တာများကွာ…ဖေဖေါ်ဝါရီ ၉ ရက်~~~
ဆိုးချက်ကရင်နင့် စရာ….တောင်ငူကိုသွားခဲ့ …ဆောင်ထူထူခြုံရင်းနဲ့ …အမှောင်ထူထူဖြတ်ခဲ့ 
ဗလောင်ဆူတဲ့ ရင်ခွင်နဲ့ ပေါ့ ………….
မင်းကChelsea ကိုအထင်ကြီးတာလား….Ferguson ကိုမက်မောတာလား
မင်းအပေါင်းအသင်းတွေလာလာကြပ်တဲ့ …၂လုံးဂဏန်းတွေနဲ့ တင်ပြာရာခပ်ခဲ့ဟိုအရင်ကတော့ ဒါဟာအမှတ်တမဲ့ ..ခုတော့ အပေါင်ဆိုင်ဆိုတာ ထဲငါဟာရောက်ခဲ့နားလည်ပေးပါ..ပရိတ်သတ်ကြီးရယ်…ဘောလုံးပွဲလေးလောင်းတဲ့ ဟာကို
အပြစ်မဲ့ တာလို့ မပြောချင်..မုသာဝါဒါကြူးလွန်ခဲ့ …
တကယ်က…နှစ်လုံးသရေ...ဒိုင်နဲ့ ပေါင်းပြီးလောင်းတဲ့ အချိန်ကြတော့ရဲကငါ့ ကိုဆွဲဆိ်..ထောင်ကျခဲ့့တာ၎နှစ်..ပျော်လို့ ထပ်ပီးနေတာ ၃နှစ် အဖြစ်အပျက်တွေပြန်လည်တွေးရင်း..အိမ်ပြန်ခဲ့ ပါတော့ ကွာငါ့ အချစ် တောင်းပန်တယ်ကွာ..တလောကလုံးဗျောင်းဆံနေတာဘဲ
ဘောလုံးပွဲဒိုင်ကိုင်တယ်ဆိုတာကတော့လုက်ဇာတ်မဟုတ်ပါဘူး ပရိပ်သတ်ကြီးရယ်
(မျောလွင့် နေတဲ့ တိမ်~~စိတ္တဇဆန်တဲ့ ဒီမိုးများ~~~ရွာနေတုန်း~~ငါချမ်းလို့ တုန် မိုးသည်းတဲ့ ညတွေမှာ~~~~ ချဲတွက်နေ တညလုံး~~ ချဲမပေါက်တဲ့ ငါတော့ ရူး)
၁၉၉၇ ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးရဲ့အောက်မှာ အမွဲဇယားကိုစတင်ခဲ့ အဲဒီနေ့ကအပူးမထွက်ပါ……….
ဒီဇင်ဘာ၈ရက်…နှလုံသားကိုဓာတ်လိုက်ပြီ ..တလုံးပဲလွဲသွားတယ်…………… ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်~~သူပေးတဲ့ လက်စွပ်မောင်းကွင်းလေးကို
လမ်းထိပ်ကဒေါ်ကြွက်မဆ်ီမှာ သွားပေါင်ခဲ့ ~~~ဘယ်တော့ မှ ပြန်မရွေးနှိုင်ခဲ့ဧပြီ၁၀ ရက်ကျွန်တော့်မွေးဂဏန်းလေးထွက်သွားတယ် အိုး....အို....အရူးအမူးပဲ မေလ၂၃ ဘ၀တသက်စာချဲထိုးစားတော့မယ်လို့လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်ခဲ့ဘူးတာပဲပျော်မြူးခဲ့ တညလုံးမအိပ်ပဲချဲတွက်ခဲ့ တဘ၀လုံးဆိတ်သုန်းမွဲရောပဲ
အောက်တိုဘာ၁၆ရက်ပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့တွေရှိသလို ထမင်းတွေလည်းငတ်ခဲ့ ပြန်ပေါက်လိုက် ပါသွားလိုက်နဲ့ အကြွေးနွံထဲနစ်ခဲ့
(မျောလွင့် နေတဲ့ တိမ်~~စိတ္တဇဆန်တဲ့ ဒီမိုးများ~~~ရွာနေတုန်း~~ငါ ချမ်းလို့ တုန် မိုးသည်းတဲ့ ညတွေမှာ~~~ ချဲတွက်နေ တညလုံး~~ ချဲမပေါက်တဲ့ ငါတော့ ရူး)
မှားယွင်းတဲ့ လမ်းတွေမှာ….ချဲထိုးတာ ငါပျော်ခဲ့ ~~~~ ချဲပေါက်ဖို့ တကယ်ခက်ခဲ…လွဲမှားတဲ့ ဘ၀ကြီးကို
သိခဲ့ ရနောက်မှာလေ~~~~ အမှားများပြန်ပြင်တုန်းမှာ….အားလုံးနဲ့ ငါကဝေး အူး…..အူး….အူး..အူး….အူး….အူး… အူး
(ကျွန်တော့်ကိုကြည့် မရလို့ တဲ့ ....ခွေး၃ကောင်လိုက်လို့ 
from သီဟထွန်း Bsc(Luv) ၏ ဖော်ဝပ်မေးမှ ရပါသည်။
ရေးသူသိပါက ပြောပါ။ ဖော်ပြရန် ဝန်မလေးပါကြောင်း...
Posted by Ko Gyii at 6:49 PM
COOLDEAR Friday, September 02, 2011
ရေသူသိကဖေါ်ပြပါဆိုလို့..... ko zzz ( shwevideos.net ) မှဖြစ်ပါသည်